Xildhibaanan cusub oo maanta loo dhaariyay kamid noqoshada Baarlamaanka Soomaaliya kadib boosas ay baneeyeen xildhibaanno kale.
Faarax Cawad jaamac iyo Adan maxamed Cali ayaa maanta waxaa loo dhaariyay kamid noqoshada baarlamaanka Soomaaliya kadib kulan baarlamaanku ay ku yeesheen golasha shacabka Soomaaliyeed.
Dhaarinta xildhibanadaan ayaa waxa ay timid kadib Kulan uu shir gudoominayay gudoomiya ku-xigeenka baarlamaanka oo ay ku yeesheesheen xubnaha barlamaanka magaalada Muqdisho iyada xildhibanada ladhaariyay lagu bedelay boosas ay baneeyeen mudanayaal kale.
Xildhibanada cusub ee kala ah Faarax Cawad jaamac iyo Adan maxamed Cali ayaa waxa ay ku hor dhaarteen xubnaha baarlamanka ee iyaga hortooda shaqada soo weday kadib markii lagu dhawaaqay in ay ku soo biireen baarlamaanka.
Dhanka kale, Baarlamaanka ayaa waxa uu maanta war bixinno ka dhageestay xunba baarlamaanka katirsan oo kasoo laabtay safarro ay ku tageen deeganada ay kasoo jeedaan oo ay u anba baxeen markii baaralaamnku uu nasiinada ku jiray.
Aqri magaca Sarkaal sare oo xabsi loo dhigay sii deynta Amiiro Shabaab ah oo horay loo soo qabtay
Ismaaciil Dhuxulow oo kamid ah saraakiisha nabad sugidda maamulka KMG ee magaalada Kismaayo ayaa maanta xabiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay in ka qeyb qaatay sii denyta saraakiil Shabaab ah oo xabsiga magaaladaasi hora ugu xirnaa.
Maamulka Kismaayo ayaa waxa ay sheegeen in amiirro badan oo Shabaab ahaa oo ku xirnaa xabsiga Kismaayo lawaayay markii baaritaan arintaasi ku saabsan labaadi goobayna ay soo baxday in Ismaaciil Dhuxulow uu iibsaday.
Dhuxulow ayaa waxa uu ku biirayaa rag horay loogu eedeeyay fududeyta deysamada Shabaabka lagu xiro xabsiga Kismaayo ee iyana markooda xabsiga ladhigayay.
Meel kasta oo ay ku suganyihiin nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyaa in ay qarash badan ka sameeyaan dagaalamayaasha Shabaabka ee lagu xiro xabsiyada ay maamulaan iyaga oo kadibna si fudud u sii daaya arintaas oo keeneysa in ay ku dhiiradaan ragga fowdadda dalka kawada in ay sii wadaan iyaga oo ku niyad san in lasoo deeyn doono hadii laqabto.
War Deg Deg Ah R/Wasaaraha Soomaaliya iyo xubno katirsan Golaha Wasiirada oo goordhaw gaaray Magaalo Madaxda Gobolka Gedo.
Wararka aan ka heleyno Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa sheegaya in goordhaw halkaasi ka dagtay Diyaarad gaar ah oo siday Wafdi Uu hogaaminayo R/Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya C/Faarax Sheyrdoon (Saacid)
R/Wasaaraha iyo Xubnaha kale ee Dowlada katirsan lana socda ayaa loo galbiyay gudaha Degmada Garbahaarey halkaas oo la filayo in kulmao kula qaataan qeybaha kala duwan ee bulshada iyo Maamulka Dowlada ee Gobolka Gedo.
Amaanka R/Wasaaraha ayana si aad ah loo adkeeyay waxaana lasocda ilaalo gaar ah oo Muqdisho ka raacay iyadoona sidoo kale la xaqiijiyay amaanka guud ee Degmada Garbahaarey halkaas oo la dhigay ciidamo aad u fara badan.
Dadweyne fara badan ayaana R/Wasaaraha iyo Masuuliyiinta lasocda kusoo dhaweeyay Caleemo qoyan iyo sacab badan waxa eena muujinayeen dareenkooda farxadeed ee ku aadan in Masuuliyiinta ugu sareesa Dowlada ee Halkaasi tagaan.
Safarka R/Wasaaraha ayaa noqonaya kii Sadaxaad uu Gobol ku tago mudo kayar 5 maalin iyadoona ugu dambeysay Maalintii shalay uu gaaray Magaalada Jowhar ee Xarunta Gobolka S/Dhaxe si weyna loogu soo dhaweeyay.
Madaxweynaha J.F.S. ayaa lugu wadaa enow qaabilo manta jaaliyada somaliayeed ku nool dalka imaratka carabta.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lugu wadaa enow la kulmo jaaliyada ku nool dalka imaratka carabta kadib marku so garay dalka imaratka asago hogamenayo wafdi heer sara ah oo wasiiro kadib waxaa qabilay madaxweynaha dalka imaratka carabta waxaa nalugu wadaa enow manta oo axad ah enow qaabilo jaaliyada somaliyeed waxana ka dhece dontaa xafladaas magalada dubai gar ahan hotelka Maridain. Oo kaso horjedaa garoonka diyarada ee dubai sacada markee tahay 6:00 maqribnemo ku so dhawadaa xaflada madaxweynaha .
R/Wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo saakay mar kale ka duulaya Magaalada Muqdisho kuna wajahan Gedo
R/Wasaaraha Soomaaliya iyo Xubno katirsan labada Golle ee Dowlada ayaa saakay lagu wadaa in ee gaaraan Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo si ay usoo qiimeeyaan xaaladaha kala duwan ee kajira Gobolka Gedo.
Qaban qaabada bixitaanka wafdigan ayaa dsi weyn looga dareemayaa garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho iyo waliba xaruntya Madaxtooyada Villa Soomaaliya ee xiligan kusuganyihiin xubnaha baxaya.
Dhanka kale Magaalada Garbahaarey ee Caasimada Gobolka Gedo ayaa amaankeeda aad loo adkeeyay waxaana hada socota qaban qaabada soo dhaweynta Wafdiga uu Hogaaminayo R/Wasaraaha Xukuumada Soomaaliya.
Booqashadan uu maanta ku tagayo R/Wasaasre Saacid Gobolka Gedo ayaa qeyb ka ah Booqashooyinka isdaba jooga ah uu maalmahan ku marayay qaar kamid ah Gobolada Dalka Soomaaliya si isku xir fiican u yeeshaan gobolada iyo Dowlada lana dhageesto baahiyada dadka kunool Gobolada Dalka booqanayaan.
Maamul gobaleed dowlada ku dhaliilay in ay hilmaamtay oo ay dhegaha kafureysay cadawgana ku fiirsatay.
Gudoomiyaha maamulka Sh/ Dhexe, Cabdi Jiinoow Calasoow, ayaa waxa uu R/wasaaraha Soomaaliya kahor cadeeyay in gobalka uu isagu hogaanka ka yahay dowladu ay dhegaha ka fureysatay baaqyo ay dhowr mar u soo dirtay.
Cabdi Jiinoow Calasoow ayaa R/wasaaraha hortiisa kayiri, “Mudane Ra’iisul Wasaare waxaa gobolka la xoreeyey 09, Dec, 2012 mana jiro ilaa iyo hada wax ciidan boolis ah oo ka howl gala gobolka, waxaana hada amniga suga ciidanka xooga, waana lama huraan in la helo ciidan nabad sugid iyo boolis isugu jira, dawladu waa ay hilmaantay gobolka mana jiraan wax mucaawino ah oo soo gaaray ilaa iyo intii laga xoreeyey nabad diidka”.
Gudoomiyaha Gobolka ayaa, dhanka kale, xusay in waqtigaan lagu jiro xili roobaadkii Gugga oo uu wabigu sameeyo fatahaad, hadii aysan dawladdu ka qayb qaadan sidii looga hortagi lahaa biyo baxdadaas ay keeni karto dhibaato soo gaarta isu socodka gaadiidka iyo beeralayda.
Cabdi Jiinoow Calasoow ayaa waxa uu ku nuux nuuxsaday in hadii dowladu ciidamada looga baahanyahay aysan geyn gobalka ay halis u yihiin kooxda Shabaab oo horay looga saaray gobalka inkasta oo uu amaanay ciidamada meleteriga ee dhexda u xirtay qaabka ay isu hortaagen in gobalkaay rabshado kadhacaan.
Xildhibaan ku geeriyooday biya qaaday qaari uu watay oo baadi goob waqti dher qatay kadib laheylay Meydkiisa.
Wararka laga helayo magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa waxa ay sheegayaan in laba ruux oo uu kamid yahay xildhibaan ay ku geeriyoodeeen biya qaaday gaari ay wateen.
Xildhibaanka oo lagu magacaabo Aadan Shire faarax iyo haween gaaiga lasaarneyd ayaa lasheegay in ay ku geeriyoodeen daad ku soo rogmaday xilli ay marayeen meel u dhexeysa Hargeysa iyo Barbara halkaasi oo roobab lixaad leh ay ka de’een.
Maamulka Somaliland ayaa baadi goob waqti dheer qaatay kadib ku guuleestay in meydka Aadan Shire faarax soo helaan, iyada oo biyuhu geeyeeen meel aan u dhaweyn halkii daadku ku helay.
Waa markii ugu horeysay ee taariikhda inta laxasuusto Xildhibaan uu ku geeriyoodo gaari uu wataty oo daad qaaday.
Gabar Soomaali ah oo daganaasho loo diiday oo In Mudda ah ku Nooleed kaniisada oo Laga Saray !!(Daawo Muuqaal+Warbixin)
Gabar Soomaaliyeed oo ku nool dalka Holland ayaa waxaa la sheegay inay soo wajahday wel wel iyo murugo badan oo ku saabsan meesha ay aadi lahayd oo ay afka saari lahayd ka dib markii meel kaniisad ah oo ay ku nooleyd loo sheegay uu ka dhamaaday waqtigii loogu talagalay inay ku noolaato.
Gabadhaan Soomaalida oo lagu magacaabo Fartuun Cabdullaahi ayaa waxaa la sheegay inay ka mid tahay qaxootiga Soomaaliyeed ee sharci la'aanta ay ku heysa dalka Holland islamarkaana la dhigay dibada loona sheegay inay ku noqoto dalkeeda. gabadhaan Soomaalida oo ku nooleyd dalka Holland mudo 6 sanadood ah hadana degan ama ka nool meel kaniisad ah oo ku taal magaalada Amsterdam ee dalka Holland oo si ku meel ah loo dajiyey ka dib markii dhamaadka sanadkii hore ay booliiska dalka Holland cagta mariyeen tendhooyin ay qaxootigaas ka dhisteen xaafad ku taal magaalada Amsterdam ayaa waxaa la sheegay in laga bilaabo bishaan 31keeda ay kaga egtahay joogitaanka kaniisadaas iyadoona aysan garaneynin meel ay afka saarto, Gabadhaas Soomaalida ah aya waxaa ay ku calaacashay inaysan aqoon meel ay aado iyadoona sheegtay inay jeclaan lahayd in la siiyo sharciga dalka Holland islamarkaana ay waxbarato nolosheedana ay dhisto, Gabadhaan Soomaaida iyo qaxooti kale oo Soomaali iyo wadamo kale isugu jira ayaa dhawaantaan waxay mudaaharaad ka dhigeen magaalada Amsterdam ayagoona ku weydiisanaayo in arintooda wax laga qabto islamarkaana aan laga musaafurin dalka Holland lana siiyo sharciga dalkaas si ay ugu noolaadan dalkaas.
Ugu dambeyntiina iyadoo qaxooti badan oo ay Soomaali ku jirto ay ku dhibaateysan yihiin dalka Holland ka dib markii loo diiday sharciga dalkaas ayaa dowlada dalka Holland waxay ku talo jirtaa in qaxootiga ka yimid dalka Soomaaliya ay dib ugu celiso magaalada Muqdisho, iyadoona dhowr jeer ku celcelisay in magaalada Muqdisho ay tahay meel amaan ah oo loo celin karo qaxootiga ayaa waxaa arintaas ka horyimid heyadaha caawiya qaxootiga iyo kuwa u dooda xaquuqda biniaadanka oo sheegay inaan magaalada Muqdisho loo celin karin wax qaxooti ah xiligaan la joogo ayagoona ku sheegay inaysan qaxootigu amaan ku ahayn magaalada Muqdisho.
Daawo Muuqaal ''Afhayeenka kooxdaas Al Shabaab oo in Mudda ah la arag oo Soo Baxay & Heshiisyo cusub oo ay gashay Al Shabaab!!
Heshiis cusub oo la isku dhaarsaday balana adagna lagu kala galay ayaa waxaa la sheegay inuu dhexmaray maleeshiyaadka kooxda Alshabaab iyo beesha Gaaljecel.
Maleeshiyaadka kooxda Alshabaab ayaa waxaa la sheegay inuu heshiis dhexmaray beesha gaaljecel iyadoona heshiiskaas la isku dhaarsaday inay beesha Gaaljecel ay si buuxda ula shaqeysa kooxda Alshabaab, heshiiskaan oo ay goob joog ka ahaayeen odayaal iyo wax garad ka soo jeedo beesha gaaljecel ayaa waxaa dhinaca Alshaab u joogay goobta uu heshiiska ka dhacaayey af hayeenka kooxdaas Sheikh Cali Sheikh Maxamuud Sheekh Cali Dheere asagoona sheegay inuu heshiiskaas uga wakiil yahay oo uu soo wakiishay amiirka kooxda Alshabaab Sheekh Muqtaar Cabduraxmaan Abuu Subeyr, iyadoona intaas ka dib ay odayaash beesha gaaljecel ay goobtaas balan ku qaadeen inay naf iyo maalba ay taageeri doonaan kooxdaas Alshabaab.
Ugu dambeyntiina iyadoo maleeshiyaadka kooxdaas Alshabaab ay sidaas oo kale ay qabiil walba odayaashiisa shir ula yeeshaan ayey waxay inta badan ka dhaadhiciyaan halgan aan la aqoon waxa uu salka ku haayo iyagoona ku marmarsiyooda inay difaacayaan diinta islaamka islamarkaana ay wadanka ka safaynayeaan waxay ugu yeereen gaalada
Qaban qaabada kulan looga hadlayo amaanka oo ka socda Muqdisho
Qaban qaabada kulan balaaran oo looga hadlayo amaanka caasimada dalka ee Muqdisho ayaa haatan ka socda xarunta maamulka Gobolka Banaadir.
Kulankan oo ay si wadajir ah u soo qaban qaabiyeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo amaanka Qaranka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa u jeedkiisu waxa uu yahay sugida amaanka Muqdisho.
Qaar ka mid ah wariyeyaashena ku sugan xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegaya in haatan ay xarunta gobolka ku sii qul qulayaan mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka, xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha, guddoomiyeyaasha dagmooyinka iyo saraakiisha ciidamada.
Waxaana kulanka la filayaa in lagu gorfeeyo sidii gacanta loogu qaban lahaa amaanka dalka oo ay ugu horeyso caasimada dalka ee Muqdisho.
Daawo sawir muujinaya taliyaha Police-ka Soomaaliya oo si daciif ah u salaamaya R/wasaare Saacid.
Iyada oo shalay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho lagu soo dhaweynayay R/wasaaraha xukuumada Federalka Soomaliya kadib socdaalkiisii uu ku uga yimid Kismaayo ayaa waxa masuuuliyiintii tegay goobta soo dhaweynta kamid ahaa taliyaha Polcie-ka Soomaaliyeed Shariif Shiikhunaa Maye iyada oo laga qaaday Sawir muujinaya salaan uu ku muujinayo sida uga cabsanayo Seefta saaxiibadii qaaday isgana ku soo socota.
Maye ayaa waayahaan waxaa lasoo dersay cabsi xooggan oo ku aadan in xilka laga qaadi doono kadib markii xilalkoodii laga qaaday taliyaasha Meleteriga iyo Nabad Sugidda Soomaaliya.
Bedelka taliyaasha ciidamada ayaa waxa uu yahay sida lasheegay mid sii socan doona iyada oo salaanta Shariif Shiikhunaa Maye loo fasirtay mid uu ku muujinayo in uu jeclaan lahaa in uu lasii shaqeeyo xukuumada cusub oo xilkiisa loo dhaafo taa oo aan la’ogeyn sida ay ku hir geli karto.
Soomaali ay ka cilowday doon ay ku tahriibayeen oo labad baadiyay xabsina lagu guray.
Saraakiisha ciidamada badda Jazeerada Malta ayaa waxa ay xaqiijiyeen in 82 ruux oo tahiirabaal Soomali ah ayna ku jiraan 10 haween ah oo mid kamid ah ay xaamila aheyd iyo cunug aad u da’ yar in labad baadiyay oo ladhigay xabsi kadib markii ay ka cilowday doon ay si sharci darra ah ugu tahriibayeen oo mareysay meel lixdan iyo sideed Mile ka jirta Malat Koofurta bada medeterian-ka.
Tahriibayaashaan ayaa waxaa lasheegay in ay ciidamada badda caawimaad weydiisteen kadib markii ay ogaadeen in aysan kabad baadi Karin cilada soo wajahday.
Dhamaan waxaa lasheegay in su’aala lagu weydiinayo xabsiga lageeyay, iyada oo qaarkood oo caafimaad darro qabay ay soo yara kabsanayaan kadib markii lala tacaalay.
Dhanka kale, ciidamada Badda Talyaaniga ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen sedax doonyood oo ay lasocdeen 260 tahriibayaal Soomaali ah kuwaas oo doonayay in ay dalkaasi ku galaan si shaqrci darro ah.
Dhamaan tahribayaashii doonyahaasi lasocday waxaa lageeyay Jazeerada Lampedusa, iyada oo saraakiishu ay sheegayaan in dhamaan ay doonyaha karaaceen xeebaha dalka Liibiya.
War deg deg ah: R/wasaare Saacid oo u anbabaxay Jowhar iyo qabanqabo lagu soo dhaweynayo oo laga dareemayo halkaasi
Magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe ayaa kasocda qaban qabadii ugu danbeysay ee loogo gol leeyahay soo dhaweynta R/wasaare Saacid oo ka anba baxay Muqdisho lana filayo in uu halkaasi gaaro dhawaan.
Wararka hor dhaca ah ee halkaasi laga helyo ayaa waxa ay xaqiijinayaan in amaanka oo aad loo adkeynayo dhaq dhaqaaqana laxadidayo iyada oo ladiyaarinayo dadweyne si gaar ah uga qeyb qaata soo dhaweynta R/wasaaraha.
R/wasaaraha xukuumada Soomaaliya, Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), ayaa safarkiisama magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/ Shexe waxa uu imaanayaa kadib markii magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose safar uu ku tegay uu ku soo dhamaaday natiija la’aan iyo jaha wareer aad u badan oo kaqira weyn kii laga filaayay.
wasiirro iyo Xildhibaanno ayaa kamid ah wafdiga lasocda R/wasaaraha ee ula anba baxay Jowhar halkaasi oo ay horay u jooogeen xildhibaanno u sii gogol xaaraya safarkiisa, waxaana lafilayaa in uu lakulmo inta uu halkaasi joogo odayaasha dhaqanka, maamulka gobalka iyo dhamaan bulshada dhinacyadeeda kala duwan.
Saacid waxaa wali ka dhex guuxaya safarkiisii natiija la’aanta ku soo dhamaaday ee uu ku tegay Kismaayo inkasta oo uu xaqiijiyay in aysan waxba u dhimeyn dadaalkooda ku aadan gudashada waajibaadka shacabka Soomaaliyeed ka saaran.
Madaxweynaha oo Dubai kula kulmay Madaxda Imaaraadka Carabta. Sawirro + Video
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sh. Maxamud oo safar shaqo u jooga dalka Midowga Imaraadka Carabta ayaa caawa wuxuu la kulmay Mudane Maxamed Bin Zayed Al- Nahyan.Kulankan ka dhex dhacay labada masuul ayaa waxaa looga hadlay amniga, horumarka, dib-u-heshiisiinta iyo xiriirka labada dal.
Mar uu Madaxweynaha la hadlayay Masuulka ayuu yiri” Waxaan kaaga mahadcilinayaa taageradaa aan aan joogsiga laheyn ee aad la garab taagan tihiin shacabka Soomaaliyeed iyo dadaalkiina ku aadan dib-u- heshiisiinta.”
Nin Iska Soo tuuray Dabaq Afar Biyaano ka kooban iyo Sababta uu isku dilay laga soo qaaday.
Maajid Faraj Al.Nowbii oo ahaa Nin dhalinyaro ah Ayaa Iska soo tuuray Dhismaha Hotel Bustan Ee Magalada Mukalla ee Dalka Yemen .
Maajid Farraj Oo 30 sano jir ahaa wuxuu la ildarnaa mudo 4 sano xanuun ku soo booday kadib markii xiligaa geeriyoodady aabihii oo ku dhintay wadanka Saudi Arabia .
Ninkan dhalinyarada ah waxaa maalinkii arbacdii laga keenay wadanka sacuudiga waxaana ladoonayay in latuso dhaqtar in badan joogay magalada mukalla si arintiisa wax uga qabto , waxaana waday ninkan wiil la dhashay oo lagu magacaabo Saciid Faraj al.nowbii.
Maalinka khamiista waxa loogu yeeray dhaqtarkii madaama uusan xamikarin in la geeyo goobta uu ka howlgalo dhaqtarku oo aan sidaa u fogayn hotelka .
Laakin nasib daro waxaa walaalkii lagu wargaliyay in wiilka la dhashay uu iska tuuray Dabaqa sare ee Hotelka uu dagnaa uuna geeriyooday taa oo mar qura qaracan iyo naxtin ku noqotay Wiilkan Walaalkiis Hotelka iska soo tuuray.
Waxana halkaasi ku soo idladay nolashii Maajid Faraj oo 30 sano jir ahaa kadib markii uu dabaqa Hotelka iska soo tuuray iyadoona arintan ay noqotay mid si aad ah looga hadal hayay dhacdadan.
Gerida ninkan dhalin yarada ah waxay walal ku abuurtay dadka dagan magalada mukalla waxayna qayb ka tahay dhibatoon haysta dhalinyarada ku nool wadanka Yaman oo qaarkood Falal fool xun ku kaca mararka qaa. .
Daawo Sawirada Muuqaalka Quruxda Badan ee Jaamacda Muqdisho kahor inta eesan Ciidamada Itoobiya Muqdisho imaan
Waxaa Halkan idinkugu soo gudbineynaa Sawiro Qurux badan aan ka qaadnay Jamaacda Magalaada MUqdisho sanado kahor inta eesan Dagaaladii Cuslaa ka dhicin Magaalada Muqdisho Ciidamada Itoobiyana eesan Dalka soo galin.
Sawiradan ayaana ah dhismaha Jaamacada ee ku yaala Magaalada Muqdisho iyadoona jaamacada ee dhisatay dhul aad u balaaran kuna yaala banaanka magaalada , waxa eena noqotay dhismaha ugu balaaran ee Jaamacadi Muqdisho ka dhisato.
Hasa ahatee Muuqaalka Jaamacda ayaa hada aheyn sidii hore waxaana saameeyay Dagaaladii cuslaa ee dalka ka dhacay taa oo keentay in jaamacada eesan dhismahaasi ku shaqeyn ilaa hada eena jiraan bur bur kasoo gaaray Dagaaladii dhacay.
Jawiga Magaalada Muqdisho oo saakay sidii hore wax badan ka badalan iyo Dadka oo saakay badi wada hurda
Roobab ee dadka iyo duunyadu ku diirsadeen ayaa xalay ka da’ay Magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah Gobolada Dalka kaa ee ku diirsadeen dadka iyo duunyada.
Roobkan oo xalay bilowday ayaa ilaa saakay socday iyadoona hada hawada tahay mid roobaad jawiga ayaana ah mid aad u macaan inkastoo Roobabkan hada ee lahaayeen saameyn soo gaartay dadka.
Dadka Danyarta ah ee kunool Guryaha cooshadaha kasameesan ayuu roobabkan saameyn badan ku yeeshay iyadoona guryaha ay ugu galeen biyo.
Maanta oo ah Maalin jimco ah ayaa inta badan dadka waxa ee yihiin kuwa kanasanaya shaqooyinka taa badalkeedana qabowga iyo Roobabka saaka jira uga faa’iideesanayaan in ee hurda dheereestaan.
Xiligan oo lagu jiro xili kuleelaha ayaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada waxaa ka jiray kuleel aad u badnaa inkastoo habeenkii xalay iyo saakay ee dadku ku diirsadeen nincada Eebe .
Dalka Imaaradka Carabta oo Caloosha Laska Xiro Si Lasku Caateysiiyo oo Soo Badatay , Daawo sawiro fanaaniin isbadalay sidey ahayeen iyo sida eey hada yihiin Farqiga udhaxeeya.
Dalka imaardka carabta Gaar ahaan Magalaada Dubai ayaa noqotay Wadanka igu badan dadka buurbuuran Qalniinka Sameeya Sidey isu caatiisiiyaan,
Hadaba is caatesiintaas ayaa lagaa Xirayaa qeeb kamid ah Calooshaada oo laguu reebayaa inyar oo aan luqmad badan aqbili karin .
waxaa jira oo soo kordha baryahan inaanu aragno fanaaniin aad ufarabadan iyago 70 Sano cimrigooda kusii dhow laakin aad moodid iney yihiin 20 jiro Taasina waxaa keentay waa Camaliyadahaas lagu sameynayo iyo isqurxintaas .
laakin waxaa yaab leh in hada arintaas kasoo gudubtay dadkii lacagta haystay iyo fanaaniintii caanka ahaa oo usoo gudbtay shacbka Danyarta ah markii qiimaheeda noqotay qalniinkaas 15,000 Dirham imaaraati 4000$ udhiganta hadaba daawo sawiro aanu kasoo qaadanay fanaaniin sida eey ahayeen iyo sidey kudanbeyeen
Xaasidnimada ciidamada Ruushka ee Xeebaha Somalia & Caqli xumada Burcad badeeda oo la qiyaamay (Bal Daawo Muuqaal Sir Culus ah)
Labo Qiyaamo oo ka dhacday Xeebaha Bada Somalia ayaa ugu dambeeyntii isku badashay mid uu ku daatay dhiig fara badan.
Burcad Badeed Soomaaliyeed ayaa Doon ka soo taagtay Calan dal kale si aan loo fahmin in ay yihiin Burcad badeed wax afduuban rabta balse ciidamada Ruushka oo arintaan fahmay ayaa iyagana Burcad Badeedii iskaga dhigay Markab Ganacsi waxeeyna Nolasha ku qab qabteen Burcad badeedii Soomalida.
Xeebaha dalka Somalia waxaa ku sugan ciidamo aad u fara badan oo qaarkood ka socda midawga Yurub kuwaas oo Burcad badeedii ay qabtaan ku soo Maxkamadeeyo dalalkooda waxaana ka xusi karnaa dalalka ku sugan Xeebaha dalka Somalia sida Holland , Denmark, Norway, Germany, England, Italy, Spain, Turkiga .Giriiga, Mareeykanka, Canada, Australia, India, China, Kenya, Japan iyo South Korea.
Ciidamada dalka Ruushka kuwooda ku sugan Xeebaha dalka Somalia ayaa waxa ay noqdeen kuwa ugu naxariista daran ee si Live ah u laayay Burcad badeed Soomaaliyeed oo ay nolasha ku qabteen kuwaas oo dhab ahaantii dalkooda ku soo Maxkamdeeyn karay balse ugu dambeeyntii waxeey Madaafiic iyo Baasuukayaal la dhaceen Burcad badeedii Soomaalida eheed oo dhoor jeer laga waayay " war Badaan halista ah ka jooga "
Ciidamada dalka Holland ayaa lagu sheegay kuwa ugu naxariista badan ee ku sugan Xeebaha dalka Somalia ka dib markii ay dhoor jeer sii daayeen Burcad badeed hubkii ay ka qaadeen ka dib markii ay u sheegteen inay yihiin Kaluumeeysato Naftooda iyo maalkooda difaacaneeysa .
Daawo Muuqaal ''Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool Dalka Canada oo soo wajahday wel wel iyo murugo kadib Markii la dilay Wiilkeeda!!
Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Canada ayaa waxaa la sheegay inay soo wajahday wel wel iyo murugo iyo hurdo la'aan joogto ah oo la xiriirta dil loo geystay wiilkeeda oo lagu dilay dalka Canada.
Hooyo Xabiibo Adan oo ah hooyada dhashay wiil dhalinyaro ah lagu magacaabi jirey Warsame Cali oo 25 sano jir ahaa ayaa waxay sheegtay inay habeen kasta ay madaxeeda wax is dhexmaraan oo ayna ka soo baraarugto hurdada marka ay saacadu tahay koowda habeenimo xilligaas oo ah markii la dilay wiilkeeda iyadoona sheegtay inaysan laba indhood aysan isku geynin, Sidoo kale ayaa abaha dhalay wiilkaas oo lagu magacaabo Moxamed Xusseen uu sheegay inuu Soomaaliya uga soo cararay xabad laakiin ay tahay wax laga naxo oo lag xumaado in xabadii uu ka soo cararay ay wiilkiisa ku disho dalka Canada oo uu islahaa waxaad ku tihiin amaan iyo nabad galyo. Wiilka qoyskaan ayaa dhamaadkii sanadkii hore lagu dilay dalka Canada asaga iyo saaxiibkiis oo la oran jirey Suleymaan Cali iyadoona aan cidna loo qaban dilkaas sidii kuwii ka horeeyey oo kale aanan cidna loogu qaban waligood.
Ugu dambeyntiina iyadoo dilka dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku disha dalka Canada uu yahay mid faraha ka sii baxaaya maalinba maalinta ka dambeysa ayaa arinta la yaabka leh waxay tahay iyadoo aysan jirin cabsi awgeed cid Soomaali ah oo ka hadli karta arimahaas ama ku dhiiran karta inay sheegta oo ay u gudbiso booliiska waxa ay og tahay oo ku saabsan dilalkaas qorsheysan ee ka dhex jira gudaha qaar ka mid ah dhaliyarada Soomaalida ee ku nool dalkaas, Booliiska dalka Canada ayaa waxaa dhowr jeer loo soo jeediyey inay qaataan ama u tababaraan qaar ka mid ah Soomaalida dalkaas inay la shaqeeyaan booliiska dalka Canada sida ay sameeyeen dalka Mareykanka oo magaalada Minneapolis oo ay Soomaali badan ku nool yihiin loo qaatay qaar ka mid Soomaalida booliiska magaaladaas arintaas oo keentay inay dhaliso amaan baaxad weyn oo ka dhasha goobaha ay Soomaalidu ku nooshahay
Rasaas Afsaar & Baas ah ka dib Mucaaradka Syria oo si Live ah gacanta ugu dhigay Wiilal u dagaalamayay..(Daawo Muuqaal+Warbixin)
Magaalada Xoms (Homs) ee dalka Syria waxaa xaafado ka tirsan si toos ah ula wareegay xoogaga Mucaaradka ku kacsan Madaxweeynaha dalka Syria Mr.Bashar Al Asad oo dhoor jiho ka soo galay deegaankaas.
Warbaahinta Caalamka ayaa laga sii daayay Muuqaalo cadeenaya Maleeshiyaadka Mucaaradka dalka Syria oo Rasaas af saar ah ama af gelis ah qabadsiiyay ciidamada daacada u ah ama taageeraya Madaxweeynaha dalka Syria Mr.Bashar Al Asad waxeeyna goobtaas ku soo furteen gawaari Milatari iyo Dhalinyaro u dagaalami jirtay Madaxweeyne Bashar Al Asad kuwaas oo lagu soo daray ciidamada Milatariga dalkaas tan iyo markii uu biloowday 2 sano ka hor dagaalka ahliga ah ee halkaas ka socda .
Madaxweeynaha dalka Syria Mr.Bashar Al Asad oo ka hadlayay Talefishinka Qaranka Syria wuxuu wacad ku maray inuu dulqaadkii ka dhamaaday dhawaana cagta uu marin doono Maleeshiyaadka Mucaaradka oo uu ku sheegay Ajaanib dalkiisa loo soo diray uuna mar dhaw fasaxi doono Diyaaradaha dagaalka iyo Taangiyo in mudo ah uu diidanaa inay weeraraan Maleeshiyaadkaas.
Dawladda Xasan Culusoow ayaa qiratay in ay ku fashilmeen wada hadalkii Kismaayo ,oo lagu kala kacay shirkii maalmahan ka socday Kismaayo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane C/kariin Xuseen Guuleed ayaa caawa shir jaraa’id ugu qabtay warbaahinta hotelka Tawakal oo ay degan yihiin wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Wasiirka ayaa aqriyay warkooban oo ay Xukuumadu soo saartay, waxaana uu u qornaa sidatan:-
Ugu horeyn, Wafdiga balaaran ee dawladu waxay ka mahad celinayaa sidii diiranayd ee naloogu soo dhaweeyay magaalda Kismaayo.
Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa ciidanka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee xoreeyay deegaankan, waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa walaalaheena Kenya hawsha ciidan ee ay deegaankan ka hayaan.
Booqashadani waxay la xiriirtaa booqashooyinkii ay dawladdu ku maraysay gobolada iyo degmooyinka dalka. Waana midii ugu dheerayd ee dawladu gasho mudaddii ay jirtay, taasina waxay muujinaysaa ahmiyda ay dawladu siinayso arrimaha la xiriira Maamulka , dib-u heshiisiinta bulshada iyo sugida amniga.
Ujeedda booqashadaani waxay ahayd, u kuurgalida xaalada deegaanka gaar ahaan mida Maamul,dhaqaale u guurgalida nolosha shacbiga iyo mida siyaasadeedba.
Waxaa wafdigu u suurto gashay inay dhagaystaan dareenka shacabka deegaanka, ayna gaarsiiyaan fariinta rasmigaa ee dawladda ee dhanka maamulka iyo arrimaha ba’nii’aadanimada.
Kadib, Markii wafdigu soo gaaray magaalda Kismaayo.
Waxaa wafdigu wada hadalo mudo dheer qaatay lagalay, masuuliyiinta deegaanka sidii laysula meel-dhigi laahaa aayatiinka siyaasadeed ee deegaanka.
Waxaana yeelanay wada hadalo ay daadihinayeen guddi farsamo oo labada dhinac ka kooban.
Ayadoo wax badan laga wada hadlay, ayaa hadana waxaa yimid qodobo Dastuuri ah oo aan la dhaafi karin, waxaana rajo ka qabnaa in qodobadaas aan xal u heli doono mustaqbalka dhaw.
Dawladu iintii ay tanaasuli kartay waa ay tanaasushay, waxaana masuuliyad dheeri dawlada ka saaran yahay sareynta dastuurka qaranka.
Waxayna had iyo jeer dawladu diyaar u tahay in wada hadaladu sii socdaan illaa xal rasmi ah loo helo arrimaha deegaankan.
Ugu danbayn, dawladdu waxay soo saari doontaa xog rasmi ah oo la xiriirta arrimaha deegaanka.
Ciidanka Booliska Gobolka Bari oo Gacanta Kusoo dhigay ragii kadanbeeyay weerar Shalay lagu qaaday mid kamid ah xarumaha Xawaaladaha Soomaaliya.
Ciidanka Booliska magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari ayaa maanta gacanta kusoo dhigay rag lasheegay in ay ka danbeeyeen weerarkii Xawaalada Kaah Maalinimadii shalay lagu qaaday.
Police-ka ayaa qabtay nin lasheegay in uu Hogaaminayay Kooxda Burcada ah ee weeraray Xawaalada Kaah Express oo da’diisa lagu sheegay 60 sano luguna Magacaabo Cabdulqaadir Xasan Ciise Dabliq, iyadoona la’sheegay in ninkaan uu ku andacoonayo in rag isku heyb ay yihiin Ganacsatada Xawaalada Kaah Express ay horay lacag uga dhaceen wiil uu dhalay oo ku sugnaa Dalka Koonfur Africa kdaibna ay khaarijiyeen.
Maamulka gobalka Bari iyo kan magaalada Boosaaso ayaa Cabdulqaadir Xasan Ciise Dabliq waxa ay u soo ban-dhigeen saxaafada iyada oo lasheegayo in uu cadaalada mari doono.
Odayga lixdan jirka ah si cad uma qiran in uu weerarkaasi isagu abaabulay hasa yeeshee waxa uu qiray in wiilkiisa ay Koofur Afrika ku khaarijiyeen ragga ku heybta ahaa ganacsatada shalay xaruntooda lagu laayay.
Waxa ay maamulku sidoo kale shegeen in ay hayaan rag kale oo falkaasi kulug lahaa ayna dhawan soo bandhigi doonaan magacyadooda.
Booliska Gobolka Bari ayaa wada dhinaca kale baaritaano kale ku aadan kooxahaan burcad ah ee dhaca kageestay shirkada Xawaalada iyadoona wararku sidoo kale sheegayaan in Ciidanku ay gacanta ku dhigeen ninkii hubeeyay Kooxahaan haatna wali ay baaritaanadu sii socdaan.
Shalay ayaa xarunta shirkada Xawaalada Kaah Express ee Magaalada Boosaso waxaa gudaha u galay koox hubeysan oo laba nin ku dhishay laba kalana dhaawac ugu geestay, boobna kula dhaqaaqday lacagtii Xawaalada oo ay kala baxsadeen lacag aan cadadeeda lasheegin.